Archive du 20200502
Holafitry ny mpanao gazety Manasa ireo haino aman-jery hanao miara-mampita
Hetsika tsotra tsy natao hamoriam-bahoaka no ho tontosain’ny holafitry ny mpanao gazety manoloana ny tsangambaton’ny fahalalahan’ny fanaovan-gazety
Ligin’ny Baolina kitra Anlamanga Efa vonona amin’ny fiatrehana ny fifaninanam-pirenena
Na dia teo aza ny fihibohana ka nampijanona tanteraka ny fifaninana teto Madagasikara amin'ny taranja baolina kitra : ny "Pro League" ny "Ligue2" sns…
Taxi-be eto an-drenivohitra Maro ireo tsy manome “Gel disinfectant” ny mpandeha intsony
Maro amin’ireo Taxi-be miasa eto an-drenivohitra ankehitriny no tsy manome “Gel desinfectant” an’ireo mpandeha miakatra ao aminy intsony.
FISEMARE “Aleo hiasa adin’ny 8 ny mpiasa”
Firaisamben’ny sendikan’ny mpiasa malagasy revolisionera na FISEMARE miatrika ny fikorontanan’ny tontolon’ny asa eto Madagasikara. Io no
Minisitry ny asa sy ny lalàna sosialy "Tsy maintsy hojerena ny olan’ireo orinasa"
Nikarakara hetsika vonjy ranovaky ny Sendika Indostrialy Madagasikara (SIM) omaly. Teny Anosy tamin’ny alalan’ny fanampiana: vary, savony, sôkôla,…no nanaovana izany.
Madagasikara Mitoetra ambony harena
Tsy zava-baovao no maheno fa manan-karena i Madagasikara. Andramena, volamena, lavanila, vato soa, harena an-kibon` ny tany maro samihafa.
Fangaraharahan’ny tetibolam-panjakana Ratsy dia ratsy ny naoty sy laharan’i Madagasikara
Vita sy nivoaka ny 30 aprily teo ny valin’ny fanadihadiana maneran-tany momba ny fangaraharahan’ny teti-bolam-panjakana ho an’ny taona 2019 na ny “ The open budget survey”
Famakiana boulangerie Lehilahy iray no tratra teny Itaosy
Lehilahy iray no voasambotry ny polisim-pirenena avy ao amin'ny CSP Itaosy ny alarobia 29 aprily teo teny amin'ny faritra Beravina Itaosy raha saika hamaky "Boulangerie" iray teny an-toerana.
Andohanimandroseza Voasambotra nandritra ny fisafoana ireo mpamaky trano
Lehilahy efatra no voasambotry ny polisim-pirenena avy ao amin’ny CSP2 Ambohijatovo nandritra ny fisafoana izay natao teny amin’ny
Mahajanga Tratra ireo mpamaky trano sy mpanolana faobe
Fanolanana faobe, vaky trano, fanafihana mitam-piadina, ireo no talentan'ireto tambazotran-jiolahy avy ao Tsararano ireto ary tokantrano maro no efa lasibatra tamin'izany.
Mpitondra Afrikanina Manomboka miala amin’ny fatoran’ny mpanjanan-tany ...
Nivory tamin’ny alalan’ny “visioncoférences” ny mpitondra Afrikanina maromaro ny alakamisy lasa teo nandihana ny fiatrehana ny Coronavirus.
Famoizam-po Novonoiny ireo zanany, namono tena izy avy eo
Vehivavy iray, 23 taona niaraka tamin’ny zanany mianadahy kely vao 3 taona sy 7 volana ilay vavikely, ary 2 taona ilay lahikely,
Disadisam-piarahamonina Resaka WC no nidarohana olona
Raim-pianakaviana mpanofa trano sy vehivavy tompon-trano iray monina ao Antalaha no niharan’ny herisetra nataona lehilahy iray mpiambina tanana ny 23 Aprily teo tokony tamin’ny 06 ora hariva.
Tontolon’ny asa Mila ezaka sy tohana mafonja
Tany amin’ny taona 1886, izany hoe 134 taona ny hetsika nataon’ny mpiasa mpitrandraka harintany tany Chicago Amerika nampiasaina toy ny biby, niantombohan’ny tolon’ny mpiasa.
Antananarivo Fantson-drano 90 km no amboarina
Manohy ny famahana ny olan’ny famatsian-drano eto Antananarivo sy ny manodidina ny JIRAMA amin’izao fotoana izao.
ANOSIZATO Maty teo ambony sarety nitondrana azy ilay lehilahy
Lehilahy iray manodidina ny 40 taona teo ho eo voalaza fa narary no maty tampoka teny Anosizato, omaly atoandro.
TOLIARA Ankizivavy 12 taona no hakan'ilay vazaha fahafinaretana
Tera-tany vahiny iray no nosamborin’ny mpitandro ny filaminana ao Toliara noho ny fanodinkodinana zaza tsy ampy taona.
Gidragidra tany Ambovombe Olona 4 nidoboka am-ponja vonjimaika
Olona 25 nohenoin’ny fampanoavana, ka 4 no nadoboka am-ponja vonjimaika noho ny raharaha Ambovombe, dia ny mpitam-bolan’ny kaominina Ambovombe Maharavo Jonarson,
Mpivarotra amoron-dalana Hanahirana ny handamina azy atsy ho atsy
Tsy vitan’ny hoe miverina fa miha mitombo isa mihitsy ankehitriny ireo mpivarotra amoron-dalana. Hita ho hanahirana ihany ny handamina azy ireny, indrindra, raha ny hita eto Antananarivo renivohitra.